जानुका धमलाको सम्झनामा सहिद रक्तिमा - Kantipath.com
जानुका धमलाको सम्झनामा सहिद रक्तिमा
त्यो उज्यालो मान्छेसंग अब कहिल्यै भेट हुने छैन भनेर अध्यारो सत्यले बेसरी चिमोटेको त्यो पल । मैले कहिल्यै सोचेको थिइन निस्साको अध्यारो रातहरु चिर्दै गर्दा उषामा चिरबिराउने कोकिल तिम्रो आवाज र भौतिक शरिरले यति चाडै छोडेर जान्छ र तिमीले शहिदको कोटामा आफनो नाम लेखाउछौ भनेर । तिम्रो क्रान्तिको आवाज नुवाकोट देखी सल्यानको अनकन्टार बस्तीहरुमा समेत तरंगित ध्वनी बनेर गुन्जीयो र त देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको भयो ।
नुवाकोट जिल्ला क्रान्तिकारी किल्ला भनेर घोषणा गर्दै गर्दाको प्यारो मान्छे तिमी । वि.सं २०३७ सालमा आमा माया देवी पौडेल र बुबा रामकृष्ण पौडेलको सन्तानहरु पाँच दाजुभाई र चार दिदिबहिनी मध्येको साइलो सन्तानको रुपमा नुवाकोट जिल्लाको हालको बेल्कोटगढी नगरपालीका वडा नम्बर ११ अमारेमा जन्म भएको थियो तिम्रो ।
म क्रान्तिको कखरा सिक्दै गर्दा तिमी त मेरो लागि ठुलो नेता भैसेकेकी थियो । म तिमीलाई पार्वती पौडेल भनेर चिन्थे मैले तिम्रो नाम क.रक्तिमा भनेर थाहा पाएको निकै पछाडी मात्रै हो । तिमी आर्दश बहुमुखी क्यापस बटारको विद्यार्थी युनियनको नेता भएको बेलादेखी नै तिम्रो नामको चर्चा सुनेको थिए तर तिमी संग भेट भने भएको थिएन । जब तिमी संग भेट भयो नि तिमी मेरो लागि कहिल्यै पनि नेता भइनौ सबै भन्दा नजिकको साथी भयौ । हृदयको कुना कन्दराहरुबाट हरेक दुखा सुखा सबै भन्न सक्ने असल अभिभावक ।
मेरो जीबनको हरेका उतरचढाबहरुलाई तिमीले नजिकबाट नियालेकी थियौ । अहिले सम्झन्छु साच्चै तिमी बाँचेकी भए एक झमट मेरो प्यारो अभिभाबक संग तिम्रो काखमा पिडाहरु रितिने गरी रुन्थे । हिजोको बलिदान संग सत्ता साटिए पछि हिजो लासको चाङबाट सत्तामा पुगेकोहरुले समेत न त तिमी जस्तै हजारौ शहिदहरुलाई सम्झीए न त युद्धमा प्राणको बाजी लगाएर लडेका योद्धाहरुलाई नै । यहाँ यस्तै यस्तै भएको प्रिय नेता तिमीहरुको बलिदानको उपहास ।
आज तिम्रो हत्या भएको दिन तिम्रो सहादत स्मरण दिन नुवाकोट जिल्लाले एउटा क्रान्तिकारी महिला योद्धा गुमाएको दिन मैले प्रिय बिचार भावना मिल्ने म जस्तै विद्रोही स्वभावको साथी गुमाएको दिन देशले क्रान्तिकारी छोरीको रगतले माटो भिजाएको दिन,२०६२ फागुन १६ गते छोरी सुजनाले आमाको काँख बाट बन्चित भएको दिन । तिम्रो जीबनसाथी क. गोकर्ण न्यौपाने क.गजेन्द्रले जीबनसाथी गुमाएको दिन । दुश्मनको घेरा तोडदा तोडदै तिमी शहिद भएको दिन । अहिले सम्झदा लाग्छ त्यो समय देश सिंगै बद्यशालामा परिणत भएको थियो ।
बिछोडको १५ वर्ष शब्दमा बयान गरेर के सक्थेर मैले तिम्रो बलिदानलाई । बलिदानलाई साक्षी राखेर भन्छु मेरो ब्यक्तिगत हित र स्वार्थको लागि तिमीहरुको इतिहास र नाममा राजनिति चाही गर्ने छैन । क.रक्तिमा तिमी प्रति लाखौं श्रद्धासुमन लाखौं श्रद्धान्जली
Previous Previous post: नेकपा फुटाउने कि जुटाउने : प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीका कस्ता सुझाब ?
Next Next post: न्यायाधीश मदन पोखरेलकी श्रीमती तुलसा घरबाटै ब्राउन सुगरसहित पक्राउ